watchOS 4 waxay noo keeneysaa sheeko caruusad cusub oo wajiyaal ah | Wararka IPhone
Intii lagu guda jiray # WWDC2017 waxaan hadda aragnay warka ugu horreeya ee ku saabsan saacadda casriga ah ee shirkadda Cupertino lasoo bandhigay. Sidaad sifiican u ogtahay, waxaan kula soconaa iyada sida ugu adag ee tooska ah dhamaan soo bandhigida, Applena waxay u aragtay inay ku haboontahay inay saacada kubilaabato. Kuwani waa wararka ku saabsan duulimaadka in Apple ay nooga tagtay watchOS 4 inta lagu gudajiray WWDC2017, sida wajiyada cusub ee Wajiga ee Toy Story iyo naqshadaynta qaybo badan oo ka mid ah is-dhexgalka isticmaalaha iyadoo looga dan leeyahay in nolosheena loo fududeeyo.
Waxaan ku bilaabaynaa cinwaanka, Apple waxay ku dari doontaa cusub Fiiri wajiyo, mid ka mid ah qodobada ugu daciifka ah, qaabeynta shaashadda soo dhaweynta. Marka ugu horeysa, waxay na tusiyeen qabsasho taxane ah oo ah habka "Kaleidoscope" customizable la qabsan doona shaashadda qalabkeena macruufka ah. Laakiin kuwa ugu soo jiidashada badan ugubadan waa imaatinka astaamaha ugu soojiidashada badan ee toy Story shaashadda yar, oo ay ku jiraan Buddy iyo Buzz Lightyear.
Laakiin tani maahan dhammaan Apple sidoo kale waxay dib-u-habayn ku sameysay dhinacyo dhowr ah oo ka mid ah is-dhexgalka isticmaalaha, cusboonaysiinta ugu horeysa waxay noqon doontaa ogeysiisyo cusub oo shaqsi ahaaneed oo ku saabsan arjiga waxqabadka, iyo sidoo kale animations-ka cusub markasta oo aan gaarno mid ka mid ah yoolalka maalinlaha ah.
Waxaan ku sii wadaynaa isdhaafsiga isticmaale ee cusbooneysiinta Codsiyada, oo noo oggolaanaya inaan ku kala beddelno iyaga oo isticmaalaya kaarar waaweyn oo si fudud loo aqoonsado. Dhanka kale, Codsiga Tareenku wuxuu helay tiro ka mid ah isbeddelada ku yimaadda adeegsadaha isticmaalaha kaas oo sidoo kale la waafajinaya nidaamka kaarka baahiyaha isticmaalaha. Si kastaba ha noqotee, kuwa ugu badan ee ay saameeyeen codsiyada waa Muusikada, Apple wuu ogyahay in barnaamijka hadda jira Muusikada watchOS way fududahay laakiin waxtar badan ma leh, sidaa darteed, hadda waxay dib u habayn buuxda ku sameeyeen arjiga si looga dhigo mid saaxiibtinimo leh
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » watchOS 4 waxay noo keeneysaa sheeko cusub oo Toy ah WatchFaces
Waad salaaman tahay, ma awoodday inaad dhigatid wajiyada sheekada caruusadda ilaalada? Waxaan hayaa WatchOS 4 oo aan ku arkaa meelna.